Dumar eedaysanayaal ah oo la horkeenay maxkamadda Minnesota ee Maraykan - BBC Somali
Dumar eedaysanayaal ah oo la horkeenay maxkamadda Minnesota ee Maraykan
9 Agoosto 2010
Image caption Xaawa M Hasan oo maxkamad taagan
Laba dumar ah oo Somali ah oo lagu eedaynayo hawlgallo la xidhiidha argagixso ayaa la hor keenay maxkamad ku taalla gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka.
Labadani qof, oo la kala yidhaa Amina Farah Ali iyo Xaawo Mohamed Hassan, haystana dhalasho Maraykan ah, waxay ka mid yihiin 14 qof oo toddobaadyadii dhawaa la magac-dhebey, kuna kala sugnaa gobollada Minnesota, Alabama, iyo Califonia, loona haysto inay xidhiidh la leeyihiin ururka Shabaab, kuna taakuleeyaan dhaqaale iyo dagaalyahanno intaba.
Amina iyo Xaawa waxay maxkamadda ka dhex sheegeen inayna iyagu qabin denbiga loo haysto ee ah xidhiidh argagixiso, hase ahaatee waxay ku doodeen inay caawinayeen oo keliya walaalahooda Somaliyeed ee ku barakacay dagaallada Somalia.
Dumarkan waxa gaar ahaan loogu eedeeyey inay dhaqaale iyo lacagba uga ururiyaan Maraykanka iyo weliba Canada gudahooga, ururka Shabaab oo loo aqoonsan yahay argagixiso, iyo inay been u sheegeen hey'adda sirdoonka FBI oo kiiskooda baadhaysey.
Waana labada qof ee keliya ee la sheegay inay haatan ku sugan yihiin dalka Maraykanka, marka loo eego 14-ka qof ee eedaysanayaasha ah ee la magac-dhebey.
Toban ka mid ah kuwaasi maqan oo rag ah, kana tegey Minnesota, waxa la rumaysan yahay inay jiraan Somalia oo ay ka garab dagaallamayaan al-Shabaab.
Maalintii isniintii, dumar badan oo xijaaban ayaa ku soo qulqulay maxakamaddii dacwaddu ka bilaabantay dhexdeeda, in kalena waxay mudaharaad ka oogeen maxkamadda horteeda, iyaga oo ku dhawaaqaya in Amina iyo Xaawo aanay wax denbi ah gelin.
Amina iyo Xaawa, waxa maxkamaddooda dib loo dhigay ilaa bisha Oktoobar ee soo socota 12-da, waxase lagu amray inayna ka bixin karin Minnesota, lacag danbe oo qaadhaan ahna ururin karin.